Inaad Aqoonto Inaad Aqoonsato Caasimadda Ireland laba Maalmood
Yurub Ireland Dublin
Gawaarida socdaalka Dublin ee Laba Maalmood
Dublin ee Laba Maalmood oo kaliya
David Soanes Sawir / Sawir Sawir ah
Sabti Sabti ah oo Dublin ah , ama laba maalmood oo kale oo ku yaal caasimadda Irish, ayaa ku siin doonta wakhti aad ku aragto wax badan, inkastoo laga yaabo in aad ka gudubto si taxadar leh feejignaanta badan ee soo jiidashada. Tani waa wakhti muhiim ah, adoo samaynaya waxa aad rabto inaad ka soo horjeesato adigoo raacaya marin-hawleed hore.
Sida had iyo jeer, haddii aad rabto inaad wax badan aragto, hore u kac oo wakhtiga safarka ku hayso Dublin ugu yaraan. Helitaanka hoy yar oo ka jaban xagga dambe ee laga yaabo inay noqoto dhaqaale been ah haddii ay macnaheedu tahay baabuur wakhti go'an.
Subaxda Maalinta 1aad
Ku bilaw bartamaha magaalada, O'Connell Street, adigoo qabatimay dhowr Tufle-Hop-on Tours oo kugu qaadan doona Dublin, adigoo dhamaystiran faallo iyo (foosto sare) fursadaha ugu fiican ee sawirada ee badan kiisaska. Tikidhada socdaalkan waxay caadi ahaan ku shaqeeyaan 24 saacadood, sidaa darteed baska ayaa noqon doona habka aad u habboon gaadiidka maanta.
Ka dib markii uu ku soo biiray safarka, waxaad ka gudbi doontaa Trinity College ka dibna madax ka noqo Goobjoogaha Dublin ee ku dhagan, dhismayaasha Dawladda, Leinster House iyo jardiinooyinka waawayn ee magaalada , Merrion Square (Archbishop Ryan Park) iyo St. Stephen's Green. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad halkan ka baxdid oo sawirro qaar ka mid ah jardiinooyinka, dhismayaasha iyo sidoo kale "Calaamadaha Dublin". Madaxa Kildare Street lugta.
Maalinta Maalinta 1aad
Matxafka Qaranka ee Ireland ee Kildare Street waa in aan la seegin oo waxa kale oo laga yaabaa inay bixiso meel wanaagsan oo qado ah. Qorshee ugu yaraan hal saac, sagaal sagaashan daqiiqo ama laba saacadood, si aad ugu socoto heerarka labada heer iyo u-barashada Irishka ee ugu fiican. Haddii aad rabto inaad ka gudubto goobo bandhigyo, hubso inaad aragto cidhibta Celtic, dhaqaalaha hore ee kiristaanka ah, qaybaha Viking, iyo bogagga bogga ee qaybta "Sacuudiga iyo Boqorka", sida Clnycavan Man .
Matxafku sidoo kale wuxuu leeyahay maqaaxi aad u wanaagsan, sidaas darteed waxaad ka qaadan kartaa qadadaada halkan. Dukaanka hadiyadaha ee aagagga laga soo galo waxay noqon kartaa fursad wanaagsan oo lagu helo alaabta xusuusta leh. Hal eray oo digniin ah, inkastoo: Matxafyada Qaranka ayaa la xiraa Isniinta, xitaa haddii ay yihiin Fasaxyada Bankiga. Si gaabis ah, laakiin xaqiiqda dhibta.
Gawaarida bas kale oo u sii gudub si aad u soo raacdo Castle Dublin oo ku taal meesha Cathedral. Siddeedda Masiixa Kaniisadda Cathedral haddii aad jeceshahay, booqasho ayaa lagula talinayaa, sida waaxda bandhigga Dublinia albaabka xiga. Kadibna raac baska.
Galabtii Maalinta 1aad
Haddii aad jeceshahay kacdoonnadaada quruxda badan laakiin goryaanka, Dublin waa meesha loo tago. Munaasabadaha Xilligii Easter-ka ee 1916-kii waxay had iyo jeer joogi doonaan xusuusta wadajirka ah. Dhoofinta basku waxay kaa qaadi doontaa taariikhdii Kilmainham Gaol , oo hadda ah tilmaan u ah dhibaatada, dhibaatada iyo dhalashada waddan. Ku riyaaqa laftiisa iyo dalxiis gacmeed oo ku socda nidaamka ciqaabta.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku talineynaa in aan ka tagno xabsiga oo uu ku sii socdo (badanaa iyada oo loo marayo Phoenix Park) Munaasabadda Qaranka ee Collins Barracks . Waxaad ka heli doontaa bandhigyo heer sare ah taariikhda militariga ee Ireland iyo dhacdooyinka 1916 (iyo Anglo-Irish War) halkan. Waxaa laga yaabaa inaad dib u soo kabato awooddaada calanka ee makhaayadda.
Ka dib, waxaad baska raaci kartaa bartamaha magaalada ama isugeyn kale ... ama u soco dhinac kale ee Liffey, iyadoo ku xiran qorshayaashaada habeenkii.
Habeenkii Maalinta 1aad
Maxaad ugu dhufatey maktabadda Guinness hadda? Bandhiga bandhiggu wuxuu ku siin doonaa aragti ku saabsan taariikhda iyo muhiimadda "alaabta madow", waxaad ku kasbataa calaamad lacag la'aan ah iyo laga yaabee kursi aad u fiican oo ku yaal Gravity Bar, mid ka mid ah fikradaha ugu fiican ee Dublin (qorraxda lagu daray waqtiga aad waa sax).
Ama soo qaado fiidkii oo dhan oo ah cunto iyo madadaalo ah Old Jameson's Distillery, halkaas oo Fiidkii Barrelman sugayo?
Qalabka (oo aan daruuri ahayn) bedelka ayaa noqon doona madaxa loo maro aagga Barxadda , wuxuu qaniinaa halkaa ka dibna wuxuu ku dhufanayaa raad-raaca. Waa hagaag, wax kasta oo aad go'aansatid ... waxaan kugula talineynaa pint ama labo bakeeriga ah fiidkii.
Subaxda Maalinta 2aad
Lagu siiyay inaadan dhaafin fiidkii ka hor, waxaad mar kale dooneysaa inaad bilowdo bilawga kadibna jimicsi lugahaaga. Maalinta labaad ee Dublin waxay ka bilaabi doontaa Trinity College, oo aad marin doonto baska hore. Hadda waa waqtigii lagu tagi lahaa.
Safar gaaban ee kulliyadda waxaa lagu sameyn karaa adiga ama mid ka mid ah kooxaha si joogto ah uga baxaya albaabka weyn. Naftaada u dhig. Taasi waxay la mid tahay Kitaabka Kells. Haddii aad runtii rabto inaad aragto (iyo maktabada Old, oo soo jiidato nafteeda), u diyaari qadar safka ah iyo waqti sugitaan. Sida caadiga ah maahan arinka ugu xun ee subaxa.
Sida soo socota, booqashada maktabadda Chester Beatty ayaa aad loogu talinayaa, waa dhawr daqiiqo oo Dame Street ah iyo saldhigga dhismaha Dublin.
Maalinta Maalinta 2aad
Ka hubi Castle Castle ee xilliga firaaqadaada, xitaa ku soo biir safar ku saabsan qalab gudaha, haddii aad rabto. Ama aragto muraayada Mustaqbalka Mustaqbalka. Ama, si fudud ha u ogolaato inaad u qaadato dhulalka ajnabigaa khasnadaha ku jira sawirada "Chester Beatty Library". Qadada qadada, labada makhaayad u dhow albaabka galbeedka iyo Ceelka Silk Road Café waxay bixiyaan cunto wanaagsan oo qiimo macquul ah.
Galabtii Maalinta 2aad
Buuxi galabtii barnaamijka ku habboon dhadhankaaga. Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay inaad ku qaadato wax waqti ah oo aad wax ku iibsato Dublin. Ama waxaad booqan kartaa Galbeedka Qaranka ee Ireland si aad u hesho waxyaabo kale oo badan. Ama, gaar ahaan haddii aad haysato carruur kula joogta, waxa laga yaabaa inaad jeceshahay inaad tijaabiso Matxafka Qaranka ee Wax-iibsiga Qaranka ama Matxafka Qaranka ee Leprechaun. Fursadaha waa kuwo aan dhamaad lahayn.
Habeenkii Maalinta 2aad
Fursadaha habeenkii waa kuwo aan dhammaad lahayn. Qaar badan oo soo booqde ah ayaa madax u noqon doona mar labaad, sidaas darteed u qabso cunto macquul ah ka dibna ku dhufo waxkasta oo aad jeceshahay. Malaha muusiga O'Donoghue ee muusiga muusikada ah? Ama mid ka mid ah Barxadaha Baraha?
Beddelka ayaa noqon lahaa bandhig, riwaayad ama ciyaar. Dublin waxay leedahay meelo badan oo madadaalo leh oo bixiya madadaalo tayo leh inta badan habeenkii sanadka. Xasuuso inaad sameyso cilmi-baaris sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, oo hore u sii akhri, inkastoo dukaamada tikidhada dambe ay suurtagal tahay
Muusikada dhaqanka ee Dublin
GPO Taariikhda Taariikhda - Dib u Dhiska Dabiiciga Easter
Toban Talooyin oo loogu talagalay Dublin ee Saint Patrick's Parade
The Medieval Saint Mary's Abbey ee Howth ah
Xarunta Maraykanka iyo Xarunta Rocket Center - Alabama's Top Paid Tourist Attraction
Sida Loogu Raaxaysto Fasaxyada Louisville
Portland Rose Festival 2016 - Hagaha martida
Khariidadda Mount Vernon Estate iyo Directions
Hagaha SoHo Guide
Iskuxidhka Cimilada Qaranka ee Denali National Park
Soo iibso Local! Fikradaha Wax-soo-iibinta Cunsuriyadaha Caawinta ee 2016-ka
Qalabka Gawaarida Gaariga ah ee Carnival
Socodka Socdaal Miyaa Marjuana Loogu Heli Karaa?